ရှေ့နေရှားနေပြီးလား NLD ၊ ကြံဖန်သင့်ပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ရှေ့နေရှားနေပြီးလား NLD ၊ ကြံဖန်သင့်ပြီ။
ရှေ့နေရှားနေပြီးလား NLD ၊ ကြံဖန်သင့်ပြီ။
Posted by အဘ ဘုတ်ကလုံ on Nov 14, 2013 in Think Different |4comments
လူဦးရေ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ဘင်္ဂလားလို . . တရုတ်လို ကပ်ရက် တိုင်းပြည်ကြီးတွေက လူလှိုင်းကြီးတွေ ရဲ့ အန္တရာယ်ကို ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်း ဥပဒေက တံတိုင်းကြီးလို ကာပေးထားတာပါ။ ခုတော့ NLD ရဲ့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ရှေ့ဆုံးက ခေါင်းဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ ကုလားရှေ့နေ မောင်ကိုနီဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ တံတိုင်း ဥပဒေကြီးကို ထိုးနှက်နေဖို့ ကြိုးစားနေပါပီ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုလားရှေ့နေ မောင်ကိုနီ ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ် အပြည်နဲ့ ကျားကုပ် ကျားခဲ တိုက်ပွဲဝင် ပုံကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ အလေးပြုပါတယ်ခင်ဗျား . . .
အောက်က စာပိုဒ်လေးကတော့ Athenian Ahnyarthar ရဲ့ အမြင်လေးပါ။
ရှေ့ နေပီပီ မသိတဲ့သူတွေကို နဝေတိမ်တောင်ဖြစ်အောင် စကားကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ပုဒ်မ ၂ ခုကိုရောချသွားတာပဲ..။ ၅၉ (စ) ကိုပြင်ခြင်းမပြင်ခြင်းနဲ့၈၂ ကို ပြင်ခြင်းမပြင်ခြင်းဟာ ဘာမှကိုမဆိုင်တာ..။ ဒေါ်စု တစ်ယောက် သမ္မတဖြစ်ဖို့ ၅၉ (စ) ကို ပြင်လိုတယ်ဆိုရင် ပြင်လိုက်ပေါ့..။ ဒါပေမယ့် ၈၂ ကို ပြင်တာက သမ္မတဖြစ်တာနဲ့ ဆက်စပ်သလား..။ မောင်ကိုနီ တို့ ရဲ့ အကြံက ဘာလဲဆိုတာ ဘူးပေါ်သလိုပေါ်နေတာပဲ..။ ဘာလို့ ဒေါ်စု သမ္မတ မဖြစ်အောင် တားတဲ့ ပုဒ်မနဲ့၈၂ ဥပဒေနဲ့ သွားဆက်စပ်တာလဲ…။ ၈၂ က ကုလားအန္တရာယ်တင်မဟုတ်ဘူး…မန္တလေးကို မျိုနေတဲ့ တရုပ် အန္တရာယ်တွက်ပါ အရေးကြီးတယ်..။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စင်္ကာပူလို.. အမေရိကန်လို ရွှေ့ ပြောင်းတွေအခြေချ ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူး..။ ဥပဒေသမားမို့ဥပဒေစကားပြောတယ်ဆိုရင် အနီးနားက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံသား ဥပဒေတွေကို ပါ နှိုင်းယှဉ်ပြောပေါ့…။ အနည်းဆုံးတော့ ဘူမိပုတြ ကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့ မလေးဥပဒေလောက်တော့ သိသင့်တယ်…။ ခုတော့…ပြည်သူ့ သည်းခြေကြိုက် ဒေါ်စု သမ္မတမဖြစ်အောင်တားမယ့် ပုဒ်မနဲ့ သူပြင်ချင်တဲ့ နိုင်ငံသားဥပဒေကို လုံးချသွားတယ်…။
၉၀ ၀န်းကျင် တောင်ပြိုကမ်းပြိုအောင်ပွဲတုန်းကလည်း ဒီလို ဆရာမွေးတဲ့ လူတွေကြောင့် တိုင်းပြည် နာခဲ့ရပြီးပြီး…ခုလည်း လာပြန်ပြီ တနည်း…။ မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေပညာရှင် ဒီလောက်ရှားသလား….ကုလားဆိုရင်လည်း…၈၂ ဥပဒေအကြောင်းမပြောတဲ့ ကုလားဥပဒေပညာရှင်မရှိလို့ လား…။ ဆရာမွေး တပည့်မွေး ကိစ္စကို ဒေါ်စု ခုချိန်ထိရုန်းထွက်နိုင်သေးပုံမပေါ်….
ဥပဒေ တစ်ခုမသွေရှိစေချင်တဲ့ မှော်ဘီက လော်ဘီအဘဘုတ်
Credit to Athenian Ahnyarthar
ဝေမျှပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ အဘ
စာနဲ့ပေနဲ့ ဝေးတော့ ကာတွန်းပဲ အလေးထား ကြည့်သွားတယ်
အဝေဖန် သိပ်မစောလွန်းနဲ့အုံးဟ… ဒါမျိုးဆိုဒါ တယောက်ထဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့မရဘူး.. အဖွဲ့နဲ့အသင်းနဲ့ လုပ်တာမျိုး.. တဦးတယောက်က ငပွဂျီးလုပ် ခေါင်းခံဒါဗဲရှိဒါ… ။ အန်အယ်လ်ဒီက လူဂျီးတွေကလဲ ငအဒွေမှ မဟုတ်တာ (လဒတွေလို့ အပြောဗူးနော်) စောင့်ကြည့်ဗာအုံး.. တိုင်နဲ့ဂေါင်း..
. လက်ရှိ အစိုးရဆိုတဲ့အစိုးရကလည်း ဖုံးလိုင်းတွေကိုပေးထားတာ ကလား
. အန်အယ်ဒီကလည်း ငှားထားတာ ကလားရှေ့နေ
. လွန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကလည်း မှတ်ပုံတင်ပေးထားတာ ကလားတွေ